Akụkọ - Gini kpatara ihe nkpuchi kachasị eji eme nkpuchi ihu eji arụ ụlọ na-esi ike ịmata
Kedu ihe kpatara ihe kachasị mma maka nkpuchi coronavirus ihu na-esi ike ịmata
Ọdịiche dị na akwa, nke dabara adaba, na omume onye ọrụ nwere ike imetụta etu nkpuchi nwere ike isi gbochie mgbasa nke nje ahụ
nke Kerri Jansen dere
Site na ikpe nke COVID-19 na-eto ngwa ngwa na United States ma na-egosi na nje na-akpata, SARS-CoV-2, nwere ike gbasaa site na ndị butere ọrịa tupu ha amalite ihe mgbaàmà, ,lọ Ọrụ US maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na-atụ aro na Eprel 3 na ndị mmadụ yikwasị akwa mkpuchi ihu na ebe ọha. Ntuziaka a bụ ngbanwe site na ọnọdụ gara aga nke ndị ahụike nwere naanị ike mkpuchi mgbe ha na-elekọta onye na-arịa ọrịa. Nkwado ahụ na-esote oku ndị ọkachamara na-adịbeghị anya na mgbasa ozi mgbasa ozi na nyiwe ndị ọzọ maka ọha na eze iji nye onyinye na-enweghị ọgwụgwọ, ihe nkpuchi ákwà iji nyere aka belata nnyefe nke akwụkwọ akụkọ coronavirus.
“Ndị ọha na eze ga-eyi ihe mkpuchi ihu na-enweghị ọgwụgwọ mgbe ha na-apụ n’ihu ọha na otu mgbakwunye ọha na eze iji belata mgbasa nke nje ahụ,” Tom Inglesby, onye isi nke Johns Hopkins Center for Health Security, tweeted na Machị 29.
Nkwado NONPROFIT SCIENCE JOURNALISM
C&EN emeela akụkọ a na mkpuchi ya niile nke ọrịa coronavirus kpamkpam dị ka ntiwapụ ka ndị mmadụ wee mata. Iji kwado anyị:
Gbanyere na ịdenye aha
Ndị ọkachamara a nwere olile anya na usoro a ga-ebelata mmụba nke ọrịa site na itinye mgbakwunye nchekwa ọzọ na ebe mmekọrịta mmadụ na ibe ya siri ike, dị ka ụlọ ahịa nri, ebe ha na-edebe ihe ole na ole nke usoro nchekwa ahụike maka ndị ọrụ ahụike.
Internetntanetị na-agbawa na usoro ịkwa akwa na ndụmọdụ nke ihe ndị kachasị mma iji, mana ọtụtụ ajụjụ a na-azaghị na-adịgide banyere etu SARS-CoV-2 si gbasaa na uru bara ụba nke mkpuchi na-enweghị ọgwụgwọ nwere ike inye ndị mmadụ na ọha na eze. N'ihi ọdịiche ebumpụta ụwa dị na ngwongwo ụlọ, imepụta nkpuchi, na omume mkpuchi ihu, ndị ọkachamara na-akpachara anya na omume a abụghị ihe nnọchi maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
“Ọ dị oke mkpa iji mesie ya ike na ijigide mgbatị mmekọrịta mmadụ isii na-anọgide na-adị mkpa iji belata mgbasa nke nje ahụ,” dị ka ibe weebụ CDC si jiri akwa mkpuchi ihu.
Ingghọta ihe nkpuchi kwesịrị ime iji chebe onye na-ebu ya na ndị gbara ha gburugburu na-amalite ịghọta otú SARS-CoV-2 si agbasa. Ndị ọkachamara na-eche na ndị mmadụ bufe nje ahụ na ndị ọzọ ọkachasị site na ụmụ irighiri iku ume. Ngwurugwu ndị a na-efe efe nke mmiri na imi, ndị a chụpụrụ site na ikwu okwu na ụkwara, bụ ndị buru ibu ma na-agabiga ebe dị anya-ha na-agbadata ala na ala ndị ọzọ n'ime 1-2 m, ọ bụ ezie na ọ dịkarịa ala otu ọmụmụ na-atụ aro ịmịpụ na ụkwara nwere ike ịkwalite ha ga-aga n'ihu (Ikuku Ime ụlọ 2007, DOI: 10.1111 / j.1600-0668.2007.00469.x). Ndị ọkà mmụta sayensị eruteghị aka na nje SARS-CoV-2 nwekwara ike igbasa site na obere aerosol, nke nwere ikike ịgbasawanye ma na-agbatị na ikuku. N'otu nnyocha, ndị nchọpụta chọpụtara na nje ahụ nwere ike ịnọgide na-efe efe na aerosols maka 3 h na ọnọdụ ụlọ nyocha (N. Engl. J. Med. 2020, DOI: 10.1056 / NEJMc2004973). Mana ọmụmụ ihe a nwere oke. Dị ka Healthtù Ahụ Ike Worldwa kwuru, ndị nchọpụta ji ngwá ọrụ pụrụ iche mepụta ọgwụ aerosol, bụ́ nke “na-adịghị egosipụta ọnọdụ ụkwara mmadụ nkịtị.”
A na-eme ya n'ụlọ na ihe nkpuchi ndị ọzọ na-enweghị ọgwụgwọ ga-arụ ọrụ dị ka mkpuchi ịwa ahụ, nke ezubere iji belata mgbasa nke nje ndị na-eyi uwe na ndị mmadụ gbara ya gburugburu na ihu site na igbochi nsị nke iku ume site n'aka onye ji ya. Anwụrụ iku ume gụnyere asọ mmiri na ụmụ irighiri mmiri, tinyere aerosol. Ihe nkpuchi a, nke ejiri mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na - enweghị ihe ọ bụla, dabara adaba na ihu ma kwe ka ikuku na - abanye n'akụkụ n'akụkụ mgbe onye ọrụ iku ume. N'ihi ya, a naghị ele ha anya dị ka ihe nchebe a pụrụ ịdabere na ha site na nje virus.
N’aka nke ọzọ, etinyere ihe nkpuchi N95 siri ike iji kpuchido onye nwe ya site na ịmịnye ihe ndị na-efe efe na ngwakọta dị mgbagwoju anya nke eriri polypropylene dị mma. Ndị a emep uta eri na-electrostatically ebubo inye mmezi "nnyapade" mgbe retaining ume. Ihe nkpuchi N95, ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi nwere ike ịza ma ọ dịkarịa ala 95% nke obere ikuku ikuku, dị oke mkpa maka nchekwa nke ndị ọrụ nlekọta ahụike na-ezute ndị ọrịa ahụ mgbe niile.
Ikike igbochi anwuru iku ume - dị ka ihe nkpuchi na ihe mkpuchi ịwa ahụ nwere ike dị mkpa n'ihi ihe akaebe na-arịwanye elu na ndị nwere ọrịa SARS-CoV-2 mana ndị nwere akara ngosi dị nro ma ọ bụ na-enweghị ọrịa nwere ike gbasaa nje n'amaghị ama.
"Otu n'ime nsogbu ndị na-akpata nje na-akpata COVID-19 bụ na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe obere mgbaàmà nke ha nwere ike ọ gaghị achọpụta, mana ha na-efe efe nke ukwuu," ka Laura Zimmermann, onye ntụzi maka ọgwụ mgbochi ọgwụ maka Mahadum Rush University na Chicago. "Ya mere, ha na-arụsi ọrụ ike na-awụfu nje virus na ike nwere ike ibunye ndị ọzọ."
Zimmermann na-ekwu na ndị otu na-ahụ maka nlekọta ahụike na Chicago atụlela maka ikesa ihe nkpuchi ndị ọrịa na-arịa ọrịa karịa ịwa ahụ, iji chekwaa ngwa ọrụ nchekwa onwe onye (PPE). "Ihe nkpuchi ahụ nwere ike inyere gị aka n'ezie ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ụdị ọrịa ọ bụla, ma ị na-anwa ịnwe ụmụ irighiri mmiri ahụ," ka ọ na-ekwu.
Na mkparịta ụka na nso nso a, otu ndị na-eme nchọpụta na mba ụwa na-akọ na ihe nkpuchi ịwa ahụ nwere ike belata oke nje nke ndị mmadụ nwere ọrịa iku ume, gụnyere ọrịa ndị ọzọ coronaviruses (Nat. Med. 2020, DOI: 10.1038 / s41591-020 -0843-2).
Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-agba ume ka ndị mmadụ na-agbasa ihe mkpuchi na-enweghị ọgwụgwọ na-egosi na mba ụfọdụ nke chịkwala ọwụwa ha nke ọma tinyekwara omume a. “Ndị otu ọhaneze na mba ụfọdụ na-ejikwa ihe nkpuchi ihu mee ihe nke ọma, gụnyere South Korea na Hong Kong,” dị ka akụkọ sitere na March 29 na nzaghachi US coronavirus sitere na American Enterprise Institute.
Linsey Marr, ọkachamara na mgbasa ozi ọrịa ikuku na Virginia Polytechnic Institute na Mahadum Ọchịchị, kwuru na echiche ya agbanweela na izu ndị na-adịbeghị anya, na ọ naghịzi eche na naanị ndị ọrịa kwesịrị itinye ihe nkpuchi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe nkpuchi ihu nwere ike inye aka belata mgbasa nke onye nwe ya na nje, ọ na-ekwu, ebumnuche bụ isi ga-eme ka mgbasa SARS-CoV-2 gbasaa site na ndị nwere ọrịa ahụ.
"Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekpuchi ihe mkpuchi, mgbe ahụ ọrịa na-erughị ala ga-agbasa site na ikuku na n'elu, na ihe ize ndụ nke nnyefe kwesịrị ịdị ala," ka o dere na email na C&EN tupu nkwenye ọhụrụ nke CDC.
Mana ndị mmadụ na-atụle ịme nkpuchi nke ha na-eche ọtụtụ nhọrọ ihu na nhazi na ịhọrọ akwa, ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe ịchọpụta nhọrọ ndị ga-akachasị dị irè. Neal Langerman, onye na-ahụ maka nchekwa kemịkal nke na-adụ ụlọ ọrụ ọdụ ugbu a na nchekwa nchekwa coronavirus, na-ekwu na ebumnuche nke ngwa ụlọ nwere ike ịdị iche na ọtụtụ na ụzọ a na-atụghị anya ya, na-eme ka o sie ike ịchọpụta nke ọma ihe kachasị mma maka mkpuchi ihu ụlọ. Udiri ihe eji kwusi ike nwere ike buru oke, ya na udiri eri eji. Dịka ọmụmaatụ, eriri anụ ọhịa nwere ike ịza mgbe ekpughere ya site na ume mmadụ, na-agbanwe arụmọrụ nke akwa ahụ n'ụzọ enweghị atụ. Enwekwara ahia puru iche site n’etiti otutu uzo di na akwa ahu na iku ume-ihe ndi kachasi nma gha adighi ike iku ume. Onye mepụtara Gore-Tex, nke dị fechaa, microporous a na-ejikarị eme ihe maka uwe n'èzí, natara ọtụtụ ajụjụ banyere ma ihe a ga-enyocha SARS-CoV-2 n'ụzọ dị irè. Companylọ ọrụ ahụ wepụtara nkwupụta ịdọ aka na ntị megide iji ihe eji eme ihe maka ihu ihu ụlọ n'ihi enweghị ikuku zuru oke.
"Nsogbu a bụ na akwa dị iche iche nwere nkọwa dị iche iche, ọ dịkwa ka enwere ọtụtụ nhọrọ na ahịa," Yang Wang, onye na-eme nchọpụta aerosol na Mahadum Missouri nke Sayensị na Teknụzụ, tweeted. Wang so na ndị nyocha na-achịkọta data mbido na nzacha nke ihe ndị na-abụghị ọgwụ maka ntiwapụ nke ugbu a.
Ndị ọkà mmụta sayensị ebutela echiche nke iji ihe nkpuchi na-adịghị mma iji gbochie ọrịa na-efe efe na-agbasa ngwa ngwa, ọtụtụ ọmụmụ ndị dị ugbu a enyochala arụmọrụ nzacha nke ihe dị iche iche nke ụlọ. Otu nnyocha banyere akwa ndị a na-ahụkarị, gụnyere ọtụtụ ụdị T-shirts, akwa mmiri, akwa nhicha ahụ, na ọbụnadị akpa n'akpa uwe, hụrụ ihe ndị egbochiri n'etiti 10% na 60% nke ihe ndị dị na mbara igwe nke yiri nke ikuku anwuru, nke dị n'usoro ihe nhichapụ filtration nke ụfọdụ ihe mkpuchi ịwa ahụ na ihe mkpuchi uzuzu (Ann. Occup. Hyg. 2010, DOI: 10.1093 / annhyg / meq044). Kedu ihe eji eme ka ihe arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche dabere na nha na ọsọ nke ule. Nnyocha na-ekwukwa na ihe mkpuchi dị na otu esi eyi ya nwere ike ịmetụta ịdị irè ya, ihe siri ike ịmegharị na ọnọdụ ụlọ nyocha.
CDC na-atụ aro iji ọtụtụ akwa akwa iji mee mkpuchi ihu. Na vidiyo, US Surgeon General Jerome Adams gosipụtara otu esi eme ihe nkpuchi dị otú ahụ site na ihe ndị a hụrụ gburugburu ụlọ, dịka T-shirt ochie.
N'agbanyeghị ọdịiche dị na arụmọrụ nkpuchi arụrụ n'ụlọ, enwere ụfọdụ ihe akaebe na ọbụnadị mbelata nke mgbasa ozi nwere ike inye aka belata ọnụego nke ịfefe ọrịa na-agafe ọnụ ọgụgụ mmadụ. N'ime nnyocha e mere na 2008, ndị nchọpụta na Netherlands chọpụtara na ọ bụ ezie na ihe nkpuchi na-adịghị mma dị ka ume iku ume nke onwe, "ụdị ọ bụla nke iji ihe nkpuchi mee ihe n'ụzọ zuru ezu nwere ike ibelata mgbasa ozi nje na ihe ize ndụ ọrịa na ọnụ ọgụgụ mmadụ, n'agbanyeghị ezughị okè na ezughị okè nrube isi ”(PLOS Otu 2008, DOI: 10.1371 / journal.pone.0002618).
Langerman na-ekwu na nchegbu ya bụ isi metụtara ọha na eze na-etinye ihe mkpuchi bụ na, dị ka PPE ọ bụla, iji ihe nkpuchi ihu nwere ike inye onye nwe ya echiche ụgha nke nchekwa, ha nwere ike ọ gaghị esikwa ike na nche ndị ọzọ. Ndị ọkachamara ekwughachilarị mkpa ọ dị ịnọgide na-adị ihe dị ka mita 6 n’ogologo ma ọ bụ n’ebe dị anya site n’ebe ndị ọzọ nọ, ma hà na-egosi ihe mgbaàmà ma ọ bụ na ha adịghị. Langerman na-adọ aka na ntị megide ịtụkwasị obi gabiga ókè na nkpuchi emere n'ụlọ iji chebe onwe gị ma ọ bụ ndị ọzọ.
"Ọ bụ ihe nke a na-agbadata," ka ọ na-ekwu. “Ọ bụrụ na mmadụ ga-eme iku ume nke ha, ha na-aghọta nke ọma ihe ọghọm dị na nhọpụta ha, nke mere na ma ọ dịkarịa ala, ha maara ihe nkwekọrịta ndị ha họọrọ bụ? Amaghị m na azịza ya ga-abụ ee. ”